Zvaunofanira kuita kana usingaone faira kubva kuICloud Drive | Ndinobva mac
Zvaunofanira kuita kana usingaone faira kubva kuICloud Drive
Mushure mekutsvagurudza kwakawanda pamambure ini ndauya kune tambo yevashandisi veApple umo mhinduro yakapihwa kuchinetso chandaive nacho nekuratidzwa kwemamwe magwaro mukati iCloud Drive. Dambudziko ratichagadzirisa nhasi rinoonekwa kana iwe ukashandisa iCloud Drive pane yako Mac uye gadzira maforodha mairi kubva kune Tsvaga.
Chero mushandisi weMac uyo asarudza tsvaga magwaro ako muICloud Drive izvo zvauchange waita kuteedzera mafaera uye maforodha uye unamate muICloud Drive. Kana iwe wakaitawo izvo, iro dambudziko ratiri kuzotaura nezvaro zviri kuitika kwauri.
Kana PC kana Mac mushandisi achigadzira mafaera pakombuta yake, chinhu chinowanzoitika ndechekuti kana akarongeka zvine mwero, anogadzira maforodha uye faira maforodha. Zvino, kana iwe wafunga kutsvaga mafaera ako ese muICloud Drive, uchafanirwa kugadzirisa faira usati waita zvakadaro, nekuti izvozvi, iyo ICloud Drive system inongobvumira maApplication kuverenga chete imwe nhanho yemafolda.
Ndokusaka kana mukati mefaira isu tiine imwe dura uye mukati mayo Mapeji, Numeri kana maKeynote mafaera, mafaera ari mune iro remukati folda haasi kuzoonekwa chero nzira. Iwe uchafanirwa kubvisa mafaera kune hombe folda kuti ive iri neiyo iOS system
Sezvatakaratidza, iwe unongomhanya kupinda muchinetso ichi kana iwe ukafambisa hutongi hwemafaira kubva kuKutsvaga kuenda kuCloud Drive kubvira kana iwe ukapinda chishandiso cheIOS uye iwe ukaedza kugadzira dhairekita mukati meimwe, iyo sisitimu imwe haikurege iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » ICloud » Zvaunofanira kuita kana usingaone faira kubva kuICloud Drive
Uye ndeyekuti ICloud Drive ichiri yakasvibirira, inoshaya akawanda ekutanga sarudzo dzeDropBox (muenzaniso webasa rakanaka), mukuwedzera pakusakwanisa kuwana mafaera zvakananga kubva kuIOS (kunyangwe iine vhezheni nyowani inouya kana zvichave zvinogoneka). Kugovana maforodha hakuwanikwe. Iyo ishoma kwazvo gore yekuchengetedza sevhisi, netariro ichavandudza mune inotevera inovandudza.
Kutenda, semazuva ese nekuda kwemipiro yako!
Ndine dambudziko rakafanana uye handina kunzwisisa kuti sei?! Kusvika ikozvino, hongu.
Mira ipapo, ndatenda zvikuru!
Ngatione kana zvikaitika kune mumwe munhu. ICloud inondiudza kuti handina nzvimbo, kuti ndinogona kutenga yakawanda, asi kana ndikawana mafaira mafaira pane yangu iPhone haindiratidze chero chinhu, kunze kweiyo isina chinhu dhairekitori "Zvinyorwa ne readdle"
Ndine Apple i pad vhezheni 10.3.4 yandakapihwa neCanada uye kana i gore dhiraivha dhizaini ichioneka otomatiki pese pandinoshandisa Apple id yangu asi mune yake iri Apple ini pad padiki yakatetepa ... haina kuoneka i gore kutyaira nekuti ichave! …… ..
Ndakapfuudza zvinyorwa zvangu kuICloud, uye izvozvi handisi kuona chero mafaera angu, ikozvino ndanzwisisa nekuda kwetsananguro yako, asi handizive maitiro ekudzosera mafaera angu. Ndokumbirawo mubatsire
Kuwedzera kwemazuva makumi matatu kwemaGreek, Apple Bhadhara kuUK, gadzira mifananidzo yeako mac, iPod nyowani uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac.
Maitiro ekunyaradza Siri